COVID-19 yakaita kuti vanhu vade bhegi remuviri
Nyanzvi dzekuchengetedza dziri kuti kutengeserana kwemhuka dzesango kunogona kuderedzwa zvakanyanya mushure mekupera kwechirwere checoronavirus. Vanoti hutachiona hunogona kunge hwakatanga pamusika unotengesa mhuka dzesango kuChina. Hutachiona hwacho hwakauya kubva kubheti kana mhuka inonzi pangolin. Yakabva yayambukira ku ...
COVID-19 yakaita vanhu vazhinji vakapfeka gown rekuzviparadzanisa nevamwe
Kupararira kwe COVID-19 coronavirus kwakaita kuti vanhu vazhinji vapfeke gown rekuzviparadzanisa uye nemaoko avo, Shijiazhuang akarongeka fashoni co.ltd iri kugadzira gown rekuti isalation. Izvo zvinhu ndeye CPE. pasocial media inoshuma kuti vanhu vazhinji uye vakapfeka gown rekuzviparadzanisa uye vari kugeza maoko ...
Kambani yedu inonamira mune dzakasiyana raincoat uye poncho yemvura kuchamhembe kweChina, zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kuendeswa kuSwitzerland. China-Switzerland FTA, iyo yakabvisa mitengo yakawanda pazvinhu, yakatanga kushanda muna Chikunguru 2014. Bhizimusi rekudyidzana rakawedzera zvakanyanya kubvira pakaitwa ...